Hetsika Bonus isan-kerinandro: Pandaria Timewalking
ny Adriel Diaz hace 4 taona .
Hey tsara! Ahoana izany? Nanomboka ny 11 Jolay hatramin'ny Alarobia 18 tamin'ny volana iny ihany ...
Torolàlana Monastera Shado-Pan / Monasiteran'ny Shado-pan
Torolàlana Monastery Shado-Pan azon'ny mpilalao aorian'ny nahatratra ny ambaratonga faha 87. Ny monasiteran'ny ivontoerana fiofanana Shado-Pan manan-danja indrindra ao Pandaria. Izy io dia nosimbain'ny Sha of Violence, nahatonga ny ankamaroan'ireo moanina Shado-Pan hifampitolona. Tsy maintsy miady eny amin'ny monasitera ianao, handresy ny Sha of Violence sy ireo mpitondra Shado-Pan marobe hanimba azy ireo.
Raikitra ny ady nanerana an'i Pandaria ary ny ady nifanaovan'ny Horde sy ny Alliance dia nitondra ady tany amin'ny Monastera Shado-Pan lehibe. Any, misy entin'olona telo mahery vaika - ny Sha of Violence, ny Sha of Hate, ary ny Sha of Anger - dia nitsoaka ny fonja. Na dia nandao ny monasitera lavitra aza ny Sha of Anger, ny roa hafa dia nanomboka nandrava ireo mpiaro mahery fo an'ny Shado-Pan.
Vavahady mahery fo an'ny mpitari-tolon'ny masoandro mody
La Puerta del Sol Poniente (vavahadin'ny masoandro milentika dia tranomaizina 5-mpilalao izay eo anelanelan'ny Vale of Eternal Blossoms sy ny Dread Wastes any Pandaria. Ny tranomaizina dia tsy misy afa-tsy amin'ireo mpilalao ambaratonga 90. Manana fihaonana 4 izy: Kip'tilak Saboteur, Mpanafika Ga'dok, Komandà Ri'mokary Raigonn.
Nandritra ny taranaka maro, rindrina lehibe antsoina hoe Dragon's Spine no niaro ny mponin'i Pandaria tamin'ny fanafihana tsindraindray nataon'ny bibikely fantatra amin'ny anarana hoe mantid. Ny tsingerin'ny herisetra mahery setra an'ity karazana ity dia nanomboka aloha kokoa noho ny nandrasana ary nahasarika ireo mpiaro ny rindrina. Satria mpiady mahery setra mahery fiampangana ny vavahady taloha, Pandaria dia tsy maintsy mandroaka ny tafika nandrava indrindra tamin'ny tantarany fantatra.
Efitra mena midorehitra mahery fo
Mogu'shan Palace dia tranomaizina misy olona 5 ao amin'ny Lohasahan'ny voninkazo maharitra ...
Fahirano ny tempolin'i Niuzao / fahirano ny tempolin'i Niuzao
Niuzao Temple Siege dia tranomaizina misy olona 5 mahery fo hita ao amin'ny Tong Long Steppes any Pandaria. Ny trano-maizina dia azo alaina ho an'ny mpilalao ambaratonga 90. Misy fihaonana 4: Vizier Jin'bak, Commander Vo'jak, Jeneraly Pa'valak, Mpitarika elatra Ner'onok.
Ny Tempolin'i Niuzao dia misy nosy mimanda roa amin'ny ilan'ny rindrina lehibe fantatra amin'ny hoe Dragon's Spine. Nandritra ny taona maro dia niaro ireo tetezana tery izay mampifandray ireo nosy amin'ny mety ho mpanafika rehetra ireo mpiaro ny pandarena miady mafy. Na izany aza, vao tsy ela akory izay ny mantid dia namorona ny tetezan'izy ireo manokana, faka faka lehibe iray ary gaga ny iray amin'ireo nosy. Ankehitriny ireo insectoid mahery setra ireo dia miomana hanafika ny mpiambina sisa an'i Niuzao.
Mist of Pandaria: scholar
Manohy ny fahitana ireo trano-maizina mahazatra nohavaozina isika, amin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny maizina sy manjombona Fianarana, fonenan'ilay Undead sy zavaboary ratsy hafa. Hihaona amin'ny olom-pantatra taloha koa isika toa ny Janice Barov y Tracheoblood miaraka amin'ny hery nohavaozina sy ny fahaiza-manao vaovao handresy antsika (na manandrana farafaharatsiny), fa kosa ny boss hafa no tia Ras Icewhisper ary nesorina ireo sefo kely enina an'ny efitrano mii. Etsy ankilany dia ho hitantsika izany Lillian voss dia mihaza ny Dark Master Gandling ho an'ny ohatra iray manontolo, mba hamaliana faty.
Ny monasiteran'ny mena
Ao amin'ny Mist fanitarana vaovao an'ny Pandaria dia hahita endrika fanavaozana ny kinova mahery fo an'ny Monastera Scarlet ianao, mizara roa lehibe izao: Ireo efitrano volomparasy vokatry ny fanakambanana eo amin'ny Library sy ny Armory, ary etsy ankilany Katedraly Scarlet ny firaisana eo amin'i El Cementerio sy La Catedral.
Torolàlana ho an'ny lapan'i Mogu'Shan, ohatra miaraka amina sefo enina ary ao amin'ny Lohasahan'ny voninkazo mandrakizay. Lehiben'ny lapan'i Mogu'Shan ...
Monasitika mena volo mahery fo
Avelako ianao miaraka amin'ny fitarihan'ny Monastera Scarlet mahery fo, ankehitriny mizara roa lehibe izy: Ireo efitrano volomparasy vokatry ny fanakambanana eo amin'ny Library sy ny Armory, ary etsy ankilany Katedraly Scarlet ny firaisana eo amin'i El Cementerio sy La Catedral.